Fifandraisana Libra sy Scorpio: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana - Famantarana Zodiac
Fanahy Mahery Biby
Fifandraisana Libra sy Scorpio: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana
Ny fatorana mampientanentana eo amin'ny Libra sy Scorpio dia mahatonga an'ity fifandraisana manitikitika ity. Samy manintona sy mampihomehy ny roa tonta. Tsy afaka ny tsy hahatsapa izy ireo fa fifanintona voajanahary amin'izy samy izy. Io herin'ny mystika sy andriamby io ao ambadiky ny fifanarahan'ny Libra sy Scorpio.
Hitan'i Scorpio fa manintona ny fanirian'i Libra ny firindrana sy ny fandanjana. Ny toetran'i Libra mahafinaritra dia mamosavy an'i Scorpio. Mahatonga an'i Scorpio hianjera haingana sy mafy ho an'ny Libra izany. Manomboka mivoatra ny fahatsapana alohan'ny hahatsapan'i Scorpio izay mitranga. Libra dia mahita Scorpio miafina sy mahavariana manomboka amin'ny voalohany.
Ity duo ity dia misy itovizany bebe kokoa noho izay eritreretin'izy ireo. Noho ny fahita iraisan'izy ireo, Libra sy Scorpio dia nametraka fototra iorenan'ny fifandraisana. Na eo aza izany, raha mizara ny marimaritra iraisana izy ireo, misy ihany koa ny disadisa.
Flirty Libra dia sahy ary misokatra amin'ny fikasana. Scorpio koa dia sahy, saingy ny fomba fanao an-tsokosoko amin'ny fanodikodinana dia tsy mitovy amin'ny Libra. Tsy misy isalasalana, ny fifandraisana Libra-Scorpio dia mahery sy sarotra!
Libra sy Scorpio Lisitry ny atiny
Fifandraisana Libra sy Scorpio
Fitiavana Libra sy Scorpio
Firaisana Libra sy Scorpio
Fifandraisan'ny lehilahy Libra sy ny vehivavy Scorpio
Libra Woman sy Scorpio Lehilahy mifanentana
Libra sy Scorpio Love Match Wrap-Up
Miverina amin'ny Zodiac Signs rehetra
Ny lalao fitiavana Libra sy Scorpio dia misy naoty iray mifanentana izay tsy eo amin'ny tabilao! Fa maninona Satria manana zavatra iraisana izy ireo. Mbola tsara kokoa aza, dia ataon'izy ireo ny ankamaroan'ny zavatra tsy itovizany. Ity Duo ity dia hahita fitiavana maharitra raha mijanona ho misokatra izy ireo, marin-toetra ary mifandray amin'ny toe-pihetseham-po.
Libra dia tsy maintsy manolotra faharetana sy fahatakarana ho an'ny mpiara-miasa Scorpio miafina. Bugging Scorpio mba hanambara izay ao an-tsain'izy ireo dia tadin'ny orsa. Misy vintana dimam-polo dimam-polo hitsangana ny bera miaraka amin'ny nify sy ny hoho! Raha tsy izany dia mety manery an'i Scorpio hiditra ao anatiny i Libra. Fomba iray ivoahana amin'ny fanontaniany pesky.
Ny faritra sasany izay iarahan'ny Libra sy Scorpio toetra sy fitondran-tena manahirana. Ohatra, ny roa tonta dia tsy manana olana amin'ny fandaniana vola. Libra dia tia ny posh sy tsara tarehy. Tsy hanana olana amin'ny fitsofana ny teti-bolan'izy ireo izy ireo mba hanomezana fahafaham-po ny faniriany fotsiny. Toy izany koa, Scorpio dia manana ny tsirony ny haitraitra, na inona na inona vidin'ny vidiny.
Na dia manaiky aza ity duo ity hanara-maso ny teti-bola dia mora ny mamela ny raharaha tsy ho voafehy. Ny fomba tokana ahafahana miatrika olana ara-bola mba hanarahana maso hatrany hatrany. Libra sy Scorpio dia tsy maintsy miresaka momba ny fetra fandaniana sy ny teti-bolan'izy ireo. Tsy maintsy hataon'izy ireo matetika izany mba hifanaraka hatrany. Tsara kokoa raha miara-miasa amin'ny mpanolotsaina ara-bola izy ireo alohan'ny handinihana izay fampiasam-bola rehetra. Mila mahatadidy ny fomba fiteny ity duo ity 'raha toa tsy dia marina loatra izany dia marina izany.' Raha tsy izany dia mora lavo izy ireo amin'ny fisolokiana amin'ny famatsiam-bola.
Mora ho an'ny Libra sy Scorpio ny mifankahita sy mifankatia. Ny Libra dia miresaka momba ny fiheverana ny olona rehetra mihaona aminy. Noho izany, rehefa Scorpio mahatsikaiky sy saro-kenatra no mahita an'i Libra voalohany, dia mihoatra ny lolo fotsiny ao amin'ny vavony. Mihazakazaka adrenalinina feno!
Raha vantany vao mifanena amin'ny Scorpio mangina sy voatokana izy ireo, dia raiki-pitia eo noho eo i Libra. Tsy voafehin'i Libra ny fifehezana an-kolaka sy fifehezan-tena nataon'i Scorpio. Hitan'i Scorpio fa mamy sy mamy i Libra. Aorian'ny resaka tsy mahazatra dia mahazo aina ireo antoko amin'ny fifandraisana Libra sy Scorpio.
virgo lehilahy sy pisces vehivavy eo am-pandriana
Avy eo, manidy ny masony izy ireo. Libra manenona famosaviana fanintona miaraka amin'ny hatsarany. Mampihomehy moramora an'i Libra i Scorpio mahafantatra tsara fa mametraka an'i Libra izy ireo noho ny faniriany bebe kokoa. Amin'ny fihaonana iray monja dia mifandray i Libra sy Scorpio. Io rehefa lasa kittens kapoka tsy azo lavina izy ireo!
Hatramin'ny daty voalohany dia mirona hifantoka amin'ny hafa ny Libra sy Scorpio fa tsy izy ireo. Libra dia te hahafantatra izay rehetra tokony ho fantatra momba ny Scorpio. Toy izany koa, i Scorpio dia te hahafantatra ny momba an'i Libra. Eto, ity duo ity dia mety hahita fotoana mahasosotra rehefa miresaka. Mety misy fihoaram-pefy amin'ny fahanginana tsy mahazo aina! Ny fahaiza-manavaka dia avy amin'ny andaniny roa ka tsy tia miresaka momba ny tenany.
Venus no manapaka an'i Libra. Mars no manjaka an'i Scorpio fa ny planeta Pluto ihany koa. Miaraka amin'ny fitaoman'i Pluto an'i Scorpio, mora ho an'i Libra ny mianjera amin'ny lafiny miafina an'i Scorpio. Fanampin'izay, amin'ny angano romana, Mars dia iray amin'ireo vadin'i Venus. Araka izany, ny herin'ny planeta dia mitaona olona roa miaraka! Izany dia toy ny hoe ny zana-tsipikan'i Cupid no namely azy roa, ka nanamora ny fitiavany. Ny toetra maha-tia an'i Libra dia mampitony ny fihetsika voajanaharin'i Scorpio. Rehefa mifankatia dia miteraka fangorahana sy fiadanam-po ny fifandraisan'ny Libra sy Scorpio.
Ny lalao fitiavana Libra sy Scorpio dia mamorona firaisana ara-nofo izay mafana toy ny volkano mavitrika iray! Na dia mifaly miaraka amin'ny orinasany fotsiny aza ity mpivady ity dia misy hafanana lehibe! Ireo toetra roa tonta dia mifandray amin'ny toetrany voalohany. Ny fidirana amin'ny lafiny biby dia mahatonga ny efitrano fatoriany ho lasa lavaka fanandramana!
Ny firaisana Libra sy Scorpio dia manomboka mirehitra mafana. Izy io dia misy ifandraisany amin'ny foreplay mahery alohan'ny fihaonana ara-batana voalohany. Libra manintona ny pataloha an'i Scorpio . Scorpio dia mahatonga an'i Libra ho very saina amin'ny fametavetana an-kolaka ataon'izy ireo. Rehefa miresaka momba ny faniriana mivantana i Scorpio dia mihazakazaka avy eo amin'ny mason'i Libra ny hatsembohana alohan'ny hanidiana ny varavaran'ny efitrano fatoriana!
Scorpio dia mihantsy nefa voafehy. Libra dia mahafinaritra sy malefaka. Ity duo ity dia handany ny daty vitsivitsy voalohany hifaneso mandra-pahatongan'ny tsy zakan'izy ireo hanana akanjo! Scorpio dia tia toerana manokana ahafahan'izy ireo mankafy Libra tsy misy bara mihidy. Noho izany, ny efitrano fandrianana tsara indrindra dia manasongadina ny ambainy mainty sy ny rindrina tsy misy feony. Raha tsy izany, ny mpifanolo-bodirindrina dia mitady fitsaboana tsy hay hadinoina ary tsy nampoizina.
Andalana akanjo miparitaka manerana ny gorodona no hianjera ao aorian'izy ireo rehefa handeha ho any amin'ny efitrano fatoriana izy ireo. Tsy misy na inona na inona ao anaty menio rehefa mahazo azy i Libra sy Scorpio! Ny roa tonta dia tsy mampiseho fampisehoana fitiavana. Saingy, Libra sy Scorpio dia mifangaro amin'ny fifandraisan'ny tsirairay rehefa irery.
Manapaka ny Libra ny rivotra, noho izany dia mpiresaka miresaka voajanahary izy ireo. Hiresaka momba ny lohahevitra rehetra hitany manentana ny saina izy ireo. Miaraka amin'ny namana maro dia misy foana ny fotoana ahafahan'ny Libra manaporofo ny fahaizany mifampiresaka.
Scorpio koa mahay miteny na dia tsy be resaka toa an'i Libra aza. Scorpio dia eo ambanin'ny singa mitaona ny Water. Mahatonga azy ireo ho olona iray izay mamela ny zavatra tadiaviny ho fantatr'izao tontolo izao hiakatra eny ambonin'ny tany fotsiny izany mba ho hitan'ny besinimaro. Ny zavatra hafa rehetra dia mitoetra ao anaty tsy fahatsiarovan-tena lalina. Scorpio dia tia ny tsiambaratelony ary miaro azy ireo amin'ny vidiny rehetra.
Scorpio kosa dia mitazona ny heviny marefo indrindra amin'ny aloky ny fanjakana. Manakana ny hafa tsy hitsara azy ireo izany. Tahaka ny Scorpion, ny toetra Scorpio dia manana akorandriaka mafy sy atiny malefaka. Izy ireo dia tsiambaratelo manampy amin'ny fiarovana ny lafiny ara-pihetseham-po malefaka kokoa.
vehivavy taurus pisces lehilahy eo am-pandriana
Scorpio sy Libra dia samy manana lafiny mahafinaritra. Libra, izay mariky ny fifandanjana, dia mivantana ihany koa. Saingy, ny Libra dia miezaka mitazona fihavanana mirindra. Scorpio dia mivantana sy manasongadina. Saingy, afaka mametra ny herisetra raha mitaky izany ny toe-javatra. Hisy fotoana eo amin'ny fifandraisana izay ilàn'ny serasera asa fanampiny.
Amin'ny voalohany, Libra dia mety hahita ny lafiny miafina an'i Scorpio. Mampisy mistery ny olon-tiany izany. Saingy, ny toetra miafina an'ny olon-tiana Scorpio dia sabatra roa lela. Indraindray i Libra dia ho hitanao fa tsy ho vita mihitsy ny mahazo an'i Scorpio haneho ny heviny. Mandra-pahatongan'ny Scorpio vonona ny hiresaka zavatra iray, tsy avelany hiala ny saka mihitsy izy ireo. Tsy misy mahasamihafa azy ny fomba maharesy lahatra ny Libra.
Fifandonana Libra sy Scorpio
Ny fifandraisana Libra sy Scorpio dia miatrika fanamby raha very i Scorpio amin'izao fotoana izao. Indraindray, mandritra ny firaisana ara-nofo, Scorpio dia mamoy ny fifehezan-tena sy ny fahononam-po rehetra. Raha mitranga izany dia mila mifandray mivantana amin'i Scorpio fotsiny i Libra. Libra dia tsy maintsy hampahatsiahy an'i Scorpio ho mailo kokoa amin'ny sehatra ara-batana sy ara-pihetseham-po. Soa ihany, fantatry ny Libra tsara ny fomba ilazana amin'i Scorpio hoe ahoana izany!
Very fitoniana i Scorpio rehefa tsy mitazona tsiambaratelo i Libra. Libra dia voajanahary amin'ny resaka be resaka ary mirona mifosa. Izy ireo koa dia mamorona rafitra laharana ho an'ny olon-tiany. Libra dia hiafara amin'ny fampitahana ny olon-tiany Scorpio amin'izao fotoana izao amin'ny olon-tiany rehetra izay efa niaraka taminy.
Ary inona no mahatsara ny rafitra filaharana raha tsy mirehareha momba ny firaisana ara-nofo mahatsiravina i Libra? Rehefa hitan'i Scorpio fa nanitsakitsaka ny lalàna 'manoroka sy milaza' i Libra dia nipoitra ny fahatezerany. Tamin'izany ny fihetsika tsy mirehareha nataon'i Libra no nahatonga azy ireo hahita olana. Raha miafara amin'ny fametrahana ny tsiambaratelo an'i Scorpio eo amin'izao tontolo izao i Libra, dia tsy ho afaka hisoroka ny fahatezeran'i Scorpio izy ireo. Tsy ho azon'izy ireo atao ihany koa ny mamily ny hevitra manaraka.
Tadidinao ny fitarihan'ny planeta Venus sy Mars ny planeta? Venus dia andriamanibavin'ny fitiavana. Mars no andriamanitry ny ady. Ny fidirana amin'ny Libra sy Scorpio amin'ny fifandraisana dia miteraka toetra roa mifanohitra. Libra dia toy ny Masoandro. Sariaka izy ireo, malemy paika, milamina ary manana toetran'andro. Scorpio dia toy ny alina. Manana lafiny aloka izy ireo izay maizina, manjombona ary indraindray somary manjombona.
Libra sy Scorpio Polarity
Amin'ny fanandroana, ny famantarana rehetra dia mifanaraka amin'ny polarity. Ny fomba fiantraikan'ny polarities amin'ny toetran'ny olona iray sy ny fitondran-tenany mamolavola ny fifandraisan'ny fifandraisana. Ny polarities koa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fifanarahan'ny Libra sy Scorpio.
Ny polarities dia ny hery Yin sy Yang. Ny fitaoman-kery dia ny vehivavy sy ny lehilahy. Ny Libra dia mifanaraka amin'ny herin'ny Yang. Scorpio dia mifanaraka amin'ny herin'i Yin. Mifameno ireo hery ireo rehefa mahay mandanjalanja.
Saingy, ny polarities dia mety hiteraka tsy fifandanjana. Yin dia mandefitra, mora mandray ary mora tohina. Raha tsy mahay mandanjalanja ny hery dia mahatonga ilay olona hikatona sy ho mahery setra. Izy io koa dia manakana ny toetran'ny intuitive Scorpio. Yang dia manamafy, mifantoka amin'ny hetsika ary mivantana. Raha tsy mahay mandanjalanja ny angovo Yang, manjakazaka, mahery setra ary mahery vaika ny Libra.
Ity duo ity dia tsy maintsy mamihina ny polarities mifanohitra mba hamerenana ny fandanjana. Mila mifantoka amin'ny toetrany matanjaka izy ireo. Ity mpivady ity dia tsara raha manome fandeferana amin'ny fahasamihafana eo amin'ny toetra. Ny fandeferana, ny fahatakarana ary ny faharetana dia ampahany amin'ny rafi-pitadiavana fahombiazana amin'ny tantaram-pitiavana.
Lafiny Libra sy Scorpio
Ao amin'ny fanandroana, ny lafiny famantarana zodiaka roa dia manampy amin'ny famaritana ny fifanarahan'ny fitiavana. Ny lafiny dia ny fandrefesana ny elanelana misy eo amin'ny famantarana amin'ny kodiarana selestialy. Miaraka amin'ny lalao fitiavana Libra sy Scorpio dia famantarana tokana ny famantarana. Izy io dia mamorona lafiny semisextile.
Ny fomba iray hahalalana ny toerana misy ny famantarana eo amin'ny kodiarana zodiac dia ny fijerena ireo famantarana tsirairay ho toy ny 'mitoetra' amin'ny habaka voatondro. Eto, Libra sy Scorpio dia famantarana na toerana iray misaraka. Araka izany dia 'mpifanila vodirindrina' amin'ny kodiarana izy ireo. Libra sy Scorpio dia monina eo amin'ny faritra iray ihany, saingy tsy midika izany fa eo amin'ny lafiny iray amin'ny arabe izy ireo. Mety hitovy amin'ny ivelany ny tranony. Saingy, tsy mitovy ny endrika anatiny. Ny hetsika ataon'izy ireo dia mety tsy hitovy amin'ny iray ihany koa.
Hifankahala na hifankatia ny mpifanolo-bodirindrina. Mahalana dia misy 'eo anelanelany.' Noho izany, Libra sy Scorpio dia mety mahita fa mitaingina tsipika tsara eo amin'ny fitiavana sy ny fankahalana. Tadidio fotsiny fa misy tsipika manify manify eo amin'ny fankahalana sy ny filana. Ny mpifanila trano efa ela dia mety hiafara amin'ny fananana fifandraisana mahafinaritra. Libra sy Scorpio dia mety ho faly raha toa ny roa tonta manolotra fanekena sy fifanajana.
Element Era Libra sy Scorpio
Ny famantarana rehetra ao amin'ny zodiaka dia mifanaraka amin'ny iray amin'ireo singa efatra manan-kery: Afo, Rivotra, Tany, na Rano. Ny fitaoman'i Scorpio dia ny singa amin'ny rano. Misy fiantraikany amin'ny Libra ny rivotra. Efa misy sahady ireo fitaomana roa ireo. Ny rivotra dia mety hiafara amin'ny rivotra sempotra. Ny singa an'ny Air dia mety hiafara amin'ny fanelingelenana ny fikorianan'ny rano voajanahary. Saingy, raha miara-miasa ireo fitaomana ireo dia afaka mamokatra rotsakorana manasitrana ho an'ny tany izy ireo.
Ny libra dia saina rehetra. Scorpio dia manonofy daholo. Miombom-po ny fo sy ny saina hifameno na hifanenjika! Miankina amin'ny fomba hanatonan'ity duo ity ny olana rehetra atrehin'izy ireo. Tia miresaka i Libra. Scorpio dia miresaka bebe kokoa momba ny faritra tsy azo tsapain-tanana sy sarotra lazaina amin'ny 'fahatsapana.'
Indraindray ireo antoko amin'ny fifandraisana Libra sy Scorpio dia tsy hahita mifanatri-maso. Hisy fotoana tsy hifankahazoan-droa io Duo io. Scorpio dia mety tsy hahatakatra ny toetran'ny Libra manidina, misavoritaka ary tsy ampoizina. Na dia mitady fanovana isaky ny mandeha aza i Libra, dia mikiakiaka amin'izy ireo i Scorpio mba hijanona. Ny mpiara-miasa Scorpio dia tsy faly amin'ny tsy fandriam-pahalemana na tsy ampoizina.
Mampametra-panontaniana ny fifanarahan'ny Libra sy Scorpio rehefa mandà ny hiara-miasa ny mpivady. Ny mpivady hafa dia mifanohitra amin'ny hamafin'ny Libra Man sy ny Scorpio Woman. Ny olona roa dia samy be fitiavana, sary an-tsaina ary mamorona. Tsy misy antony avy amin'ny lehilahy Libra, ary ny vehivavy Scorpio dia tsy afaka mandresy ireo fandrika eny an-dàlana mankany amin'ny fitiavana mandritra ny androm-piainany.
Rehefa milatsaka amin'ny vehivavy Scorpio ny lehilahy iray any Libra dia hoesoriny avokoa ny fijanonana rehetra rehefa manandrana mamita azy izy. Raha ny fitiavana sy ny tantaram-pitiavana no resahina, ny lehilahy Libra dia toy ny mpandefa ozona famosaviana. Hanamboatra tranokala manintona sy manintona izy, ary mamela ny Vehivavy Scorpio manintona sy mahay miteny.
Ny daty voalohany misy eo anelanelan'ny Libra Man sy Scorpio Woman dia ao an-tanàna. Saingy, ny fitsangatsanganana dia any amin'ny toerana tsy miankina sy mangina. Vehivavy Scorpio dia tia fiainana manokana. Ny lehilahy iray Libra dia sahirana mba hiteny momba ilay Vehivavy Scorpio miafina sy mahafinaritra hiresaka momba ny tenany, saingy coy loatra izy. Naveriny tany aminy foana ny resaka.
Tian'i Libra ny miresaka na inona na inona. Noho izany, tsy manana olana amin'ny firesahana momba ny tenany, ny fihetseham-pony ary ny nofiny izy. Ilay vehivavy Scorpio dia mahita ilay lehilahy Libra mahavariana. Mitroka ny teny rehetra lazainy izy. Mandritra izany fotoana rehetra izany dia manisy zava-dehibe zava-dehibe ao amin'ny fitadidiany izy ho fitadiavana amin'ny ho avy.
Izy dia mandray an-tsoratra ny zavatra rehetra ankafiziny sy iriny. Raha miresaka faniriana dia daty vitsivitsy fotsiny alohan'ny hahitan'ity duo ity eo anelanelan'ny lambam-pandriana satin! Ny ankamaroan'ny fotoana, ny Scorpio Woman dia miresaka ny filan'ny Lehilahy Libra rehetra. Mafana be ny firaisana eo amin'izy ireo. Ity mpivady ity dia tsy manapaka na inona na inona amin'ny menio momba ny firaisana raha tsy efa nanandrana azy farafaharatsiny indray mandeha.
Fifanarahana vehivavy lahy sy taurus vehivavy
Indraindray, ny filan-dratsin'ny lahy sy ny vavy dia mahatonga ny vehivavy Scorpio tsy hihaino tsara ilay lehilahy Libra. Rehefa tsy mahita ny zavatra tadiaviny intsony izy ireo dia rehefa misongadina ny filan-dratsiny sy ny filan'ny nofo. Ny vehivavy Scorpio dia tratra ary nifatratra tamin'ny 'fahatsapana tsara.' Amin'izay fotoana izay dia mila fampahatsiahivana malefaka izy fa mbola ao amin'ny efitrano ny Lehilahy Libra!
Na dia mahafinaritra aza izany, ny lalao fitiavana Libra sy Scorpio dia miatrika fanamby lehibe. Ny lehilahy libra dia olona iray izay miezaka hitazona ny fandriam-pahalemana amin'ny toe-javatra rehetra. Te hampifaly ny olona rehetra mifanerasera aminy izy, ary io faniriana io irery no manahirana. Na dia fantany aza fa tsy azo atao ny mitazona ny olona rehetra ho falifaly dia mora manitatra ny tenany izy.
Mora ho an'ny Lehilahy Libra ny ho tonga Lehilahy 'Eny' amin'ny fanekena ny fangatahana na fangatahan'ny namana sy fianakaviana. Vetivety dia hitany fa sahirana izy mitazona ny fampanantenany rehetra nataony. Ny zavatra fantatrao manaraka, ny Scorpio Woman dia eo amin'ny farany lisitr'ireo laharam-pahamehany. Tsy manahy fa tsy hilefitra mandritra ny fotoana maharitra izy. Ny Scorpio Woman dia tsy hiandry mandrakizay alohan'ny hitakiany fa hihaino tsara kokoa ny filany izy.
Ny fitiavana eo amin'ny lehilahy Libra sy ny vehivavy Scorpio dia mahery vaika tahaka ny filan'ny nofo. Indraindray, mahery loatra. Ny lehilahy libra dia tia olona ary indraindray manadala na dia tsy misy vokany ratsy aminy aza izany. Vehivavy Scorpio dia tsy mandray tsara amin'ny fomba maloto. Ny labiera saro-piaro ary mivoaka ny poizin'ny maingoka!
Ny fifandraisana Libra sy Scorpio dia iray manaporofo fa mahery ho an'ny roa tonta. Ilay Libra Woman sy Scorpio Man dia hahita fifaliana sy fitiavana rehefa mizaha tantaram-pitiavana. Lehilahy Scorpio no fanahy mirehitra sy miafina izay nofinofisin'i Libra. Ny vehivavy Libra dia mitondra fifandanjana sy firindrana amin'ny fifandraisana. Lehilahy Scorpio mitondra intriga sy mistery.
Tsy mahagaga izany. Vehivavy Libra mino fa nahita ny maherifony Byronic tao amin'ny Scorpio Man izy. Izy dia lava, mistery ary mainty. Mino izy fa afaka mitondra azy ny fandriam-pahalemana sy fandanjalanjana toa tsy ananany. Hatrany am-piandohana dia mandeha niasa izy nanandrana 'nanamboatra' ilay Scorpio Man. Manantena izy fa 'hanasitrana' azy amin'ny fitiavana rehetra azony omena azy.
Saingy, ny Scorpio Man dia tsy mitaky fanamboarana. Farafaharatsiny, tsy hitany izany. Faly izy miafina. Rariny izy indraindray amin'ny maha-broody na manonofinofy azy. Ny Libra Woman dia mianatra haingana fa tsy maintsy manamboatra ny fara-tampon'ny Scorpio izy raha toa ka manana vintana ny tafavoaka velona. Tsy misy lahatra fandresen-dahatra hahatonga an'i Scorpio hanova ny toetra maha-izy azy.
Ny fahavononany handray an'i Scorpio 'as is' dia mamaritra ny fifanarahan'ny Libra sy Scorpio. Ny Libra Woman dia hijery hanamafy ny fifandraisana ara-pihetseham-po eo amin'izy ireo. Scorpio dia hikaroka izay ilain'ny nofo sy ara-batana. Saingy, manam-paharetana izy. Vonona izy hiandry mandra-pahatongan'ny Libra hitrandraka ny toetran'izy ireo ara-nofo.
Vantany vao mikatona ao aorian'izy ireo ny varavaran'ny efitrano fandrian, dia afaka i Scorpio. Tsy misy fihazonana sakana eo anelanelan'ny lambam-pandriana. Ilay Scorpio Man dia andrana tokoa. Tsy manana olana i Libra aorian'ny fanarahany ny efitrano fatoriany. Eto izy dia faly mandao ny fifehezana sasany ary mandray ny andraikitra manoa. Ny tena tanjony dia ny mahita ny fahafaham-po ny faniriany rehetra.
Any ivelan'ny efitrano fandriana dia manapo ny lohany rehefa manandrana mamantatra hoe iza no mitarika. Samy manana ny lisitry ny fandaharam-potoana sy ny siny avy ny roa tonta. Tsy maintsy hanaiky lembenana izy ireo hiantohana ny fahafaham-po sy ny fahatanterahana. Ity duo ity dia tokony hifandimby hanamarina ny lisitra 'hataony'. Noho io antony io dia mila manilika ny fiarahamonina i Libra. Mila mandany fotoana manokana bebe kokoa amin'i Scorpio izy. Toy izany koa, ny Scorpio Man dia mila manome làlana kely. Mila mivoaka avy ao amin'ny akorany izy ary somary sosialy kely kokoa.
Vehivavy Libra sy Scorpio Man mizara ny filàna fanoloran-tena sy fahitana mialoha. Saingy, tsy mitovy ny fironana amin'ny fialonana. Ao anaty lalina ao anatiny, Scorpio matoky tena dia manana tsy fandriam-pahalemana mahatalanjona. Raha sendra fifandraisana ratsy be izy talohan'ny nifanenany tamin'ny Vehivavy Libra dia mihabe ny singa fialonana!
Voajanahary ho an'ny Vehivavy Libra ny milalao sy misoloky indraindray satria miovaova izy. Ara-dalàna ihany koa ho an'i Scorpio, izay miafina tokoa, ny misolelaka amin'ny hafa koa. Raha misoloky i Scorpio, dia hamela ny helony matetika i Libra. Saingy, tsy mamaly ny famelan-keloka i Scorpio. Tsy azony atao ambanin-javatra ny tsy fahaizan'ny vehivavy Libra. Miteraka fahasimban'ny fifandraisana izany.
Ny lalao fitiavana Libra sy Scorpio dia manana fitiavana mafana sy masiaka. Raha mirona amin'ny afon'ny fitiavany izy ireo ary mitazona ny lelafo mifehy, dia haharitra izany fifandraisana izany. Raha avelany hangatsiaka ny bara, dia hifankaleo izy ireo. Raha avelany tsy ho voafehy ny afo, dia ho faty ny fifandraisana ary ho faty.
Manontany tena ve ianao raha toa ka misy antony mampifanaraka azy ny fifandraisanareo? Inona no tena fantatrao momba ny olon-tianao? Natao hifanarahana ve sa hifandona? Azonao atao ve ny manatsara ny fahombiazan'ny fifankatiavana? Avelao ny Astros Horoscope Daily haneho aminao ny fampahalalana rehetra momba ny fifanarahana ilainao. Ianaro ny fomba ahafahanao manararaotra ny fifandraisanao! Ny zava-drehetra ilainao dia ny totozy totozy!
Vakio rehetra momba ny famantarana Zodiac Libra
Tsindrio raha hianaranao rehetra Ny toetran'ny Libra, ny toetrany ary ny toetrany !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifandraisana Libra !
Makà fampahalalana lalina momba ny Lehilahy Libra !
Mamaha ny zava-miafina ny Vehivavy Libra !
Manana zanakavavy na zanaka libra? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Ankizy Libra !
Fifanarahana Capricorn sy Pisces: Fisakaizana, fitiavana ary firaisana
Ny dikan'ny karatra Tarot adala
Nomery 6: Làlan'ny fiainana laharana 6, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra
Ny dikan'ny Swan Celtic Zodiac, ny toetrany, ny toetrany ary ny fampifanarahana
Element of Earth Symbolism sy dikany
planeta inona no akaiky kokoa ny masoandro
fisakaizana lahy sy vavy vehivavy virtoaly
manao ahoana ny fampifanarahana ireo planeta anio
ny homamiadana sy ny sagittarius dia lalao mety